Somali haysta Dhalashadda dalka Britain oo lagu maxkamadeyn doono Jesiiradda Qubrus – idalenews.com
Saddex nin oo u kala dhalatay dalalka Somalia iyo Pakistan, balse wada haysta dhalashadda dalka Britain ayaa lagu wadaa in bishan April 22-da la soo taago Maxkamad ku taalla Jesiiradda Qubrus (Cyprus).
Raggaasi oo mid asalkiisu yahaySomali iyo labo asalkooda Pakistani yahay ayaa waxay haatan ku xiran yihiin Xabsiga Dhexe ee Caasimadda Qubrus ee Nicosia Central Prison.
Saddexda Nin oo Dalxiisayaal haysta British Paasaport ayaa loo haystaa inay si wadajir ah tooreey ugu dileen Askari u dhashay dalka Britain, oo la oran jirey David Lee Collins oo 19-jir ah, kaasi oo lagu dhex dilay Dhismo lagu caweeyo.
Eedeysanayaashaasi ayaa waxaa bishan 15-dii la soo taagay Maxkamadda Degmadda Larnaca Court , iyagoo lagu soo oogay inay dileen Askari u dhashay dalka Britain, kaasi oo ay tooreey kaga dhufteen wadnaha bishii November 4th ee sannadkii hore.
Eedeysanayaasha oo la qabtay wax yar kadib markii uu falkaasi dhacay waxay beeniyeen inay dilkaasi geysteen.
Xeer-beegtidda Maxkamadda, ayaa shaacisay in Kiiskan dib loo dhegeysan doono bishan April 22nd, iyadoo Maxkamadda la hor keenay 11-tooreey oo ay ku jirtay kuwii lagu dilay Askariga geeriyooday oo ka tirsanaa Guutadda 2-aad ee Ciiddamadda Boqortooyadda Britain ee uu fadhigoodu dhexe ku yaallo magaalladda Dhekelia.
Idale News Muqdishp